संस्थापन समूहबाट भने देउवा आफैं सभापतिमा भिड्दै छन् । सो समूहबाट हालका उपसभापति विमलेन्द्र निधि र गोपालमान श्रेष्ठले पनि सभापतिमा उठ्ने घोषणा गरेका छन् । यसैगरी, इतर समूहबाट वरिष्ठ नेता पौडेल, नेता सिटौला महामन्त्री डा. कोइराला, पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह, केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइराला, नेत्री सुजाता कोइराला र युवा नेता कल्याण गुरुङले सभापतिमा उम्मेदवारी दिने तयारी गरिरहेका छन् । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।